Ny CDC dia mitaky angon-drakitra manangona fifandraisan-davitra avy amin'ny mpandeha DRC sy Guinea
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny CDC dia mitaky angon-drakitra manangona fifandraisan-davitra avy amin'ny mpandeha DRC sy Guinea
Ity baiko ity dia manaraka ny lalàna farany vonjimaika tamin'ny febebily 2020 izay nanome alalana ny CDC hitaky kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy mpandraharaha fiaramanidina hafa mba hanangona angon-drakitra sasany avy amin'ny mpandeha alohan'ny hidirany amin'ny sidina mankany Etazonia, ary hanome ny fampahalalana amin'ny CDC ao anatin'ny 24 ora aorian'ny kaomandy CDC.
Misy valan'aretina Ebola Virus (Ebola) amin'izao fotoana izao any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC) na ny Repoblikan'i Guinea
Ny dia an-dranomasina dia mety hitaterana olona, ​​ny sasany amin'izy ireo dia mety tratry ny aretina mifindra, na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny 24 ora.
Ny Airlines sy ny mpikarakara fiaramanidina hafa dia hanangona ity fampahalalana ity ary handefa izany amin'ny alàlan'ny elektronika, hahafahan'ny CDC mandray ireo angona ireo amin'ny fotoana mety
Manomboka amin'ny Alakamisy 4 martsa 2021, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny mpandraharaha fiaramanidina hafa dia takiana mba hanangona sy hampita ny fampahalalana momba ny fifandraisana Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) ho an'ny fanaraha-maso sy fandraisana an-tanana ny fahasalamam-bahoaka mety amin'ny mpandeha rehetra mankany Etazonia izay tao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC) na ny Repoblikan'i Guinà tao anatin'ny 21 andro talohan'ny nahatongavan'izy ireo tany Etazonia.
Misy valanaretina aretina Ebola Virus (Ebola) amin'izao fotoana izao any DRC sy Guinea. Ny fahaizana mamantatra sy mahita ny olona any Etazonia izay mety tratry ny aretina azo afindra, toy ny Ebola, any ivelany dia manandanja hanakana ny fihanaky ny aretina ao anatin'ny fiarahamonina amerikana. Ny fidirana amin'ny fampahalalana fifandraisan'ny mpitsangatsangana dia hamela sampan-draharaha federaly, fanjakana, ary sampan-draharaham-pahasalamana eo an-toerana hanome fampahalalana momba ny fahasalamana, hanara-maso ireo mpandeha ny famantarana sy ny soritr'aretin'ny Ebola, ary hiantohana ireo mpitsangatsangana izay mamorona soritr'aretina dia voasaraka haingana ary mahazo tombam-bidy sy fikarakarana ara-pitsaboana sahaza. .
"Ny fanaraha-maso ara-pahasalamam-bahoaka ara-potoana dia mitaky tompon'andraikitra ara-pahasalamana hanana fidirana eo noho eo amin'ny fifandraisana marina sy feno ho an'ireo mpandeha rehefa tonga any Etazonia izy ireo," hoy ny talen'ny CDC Dr. Rochelle Walensky. “Ny fampahalalana mifandraika amin'ny diso na tsy feno dia mampihena ny fahafahan'ny manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka hiaro haingana ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny besinimaro. Ny fanemorana ny fifandraisana amin'ireo olona miharihary dia mety hampitombo ny fihanaky ny aretina. ”
Ny fitsangatsanganana an-habakabaka dia mety hitaterana olona, ​​ny sasany amin'izy ireo dia mety tratry ny aretina mifindra, na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny 24 ora. Amin'ny toe-javatra sasany, ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka dia mety mila manara-dia amin'ireo mpizahatany tonga avy any amin'ny firenena nitrangan'ny valanaretina, toy ny valan'aretina Ebola any RDC sy Guinea.
CDC dia nanondro ny habetsaky ny fampahalalana ilaina hitadiavana mpizahatany azo antoka rehefa tonga any Etazonia izy ireo: anarana feno, adiresy raha any Etazonia, nomeraon-telefaona voalohany, nomeraon-telefaona faharoa na vonjy taitra, ary adiresy mailaka. Ny Airlines sy ny mpikarakara fiaramanidina hafa dia hanangona ity fampahalalana ity ary handefa izany amin'ny alàlan'ny elektronika, hahafahan'ny CDC mandray ireo angona ireo amin'ny fotoana mety.
Ny governemanta amerikana koa dia hanomboka hamily ny mpandeha an'habakabaka avy any DRC sy Guinea mankany amin'ny seranam-piara-manidina enina any Etazonia izay efa tonga ny 96% ny mpandeha an'habakabaka avy amin'ireo firenena ireo. Ny seranam-piaramanidina enina dia misy an'i New York (JFK), Chicago (ORD), Atlanta (ATL), Washington DC (IAD), Newark (EWR), ary Los Angeles (LAX). Ny mpandeha dia afaka manantena ny fampahalalan-kaontiny izay hohamarinin'ny tompon'andraikitra amerikana rehefa tonga izy ireo mba hahazoana antoka fa marina sy feno izany. CDC dia hizara fampahalalana mifandraika azo antoka amin'ny sampana ara-pahasalamana eo an-toerana sy eo an-toerana ho an'ny tanjon'ny mpandeha any Etazonia.
Misafidy seranam-piaramanidina dimy ny FAA hanombanana ny loza mety hitranga amin'ny fiaramanidina tsy voafehy
Rivotra madio ao amin'ny efitranon'ny hotely: Ahoana ary nahoana